Dagaallo Aad U Qaraar Oo Ka Holcaya Dhowr Gobol Oo Itoobiya Ah. (Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaallo Aad U Qaraar Oo Ka Holcaya Dhowr Gobol Oo Itoobiya Ah. (Warbixin)
Last updated Sep 28, 2021 130 0
Dagaalada ka socda dalka Itoobiya ayaa aad usii xoogeystay 48-dii saac ee lasoo dhaafay iyadoo aagaga kala duwan si isku mid ah loogu hardamayo. Waa dagaallo culus oo u dhaxeeya dowladda Itoobiya oo garabsanaysa ciidanka Eratariya, malleyshiyaadka Amxaarada iyo kuwa kale oo meelo kala jaad ah laga soo uruuriyay. Dagaaladu waxay ka holcayaan dhulka Amxaarada oo ay qeybo kamid ah horey u qabsatay Tigree sida gobolada Wallo iyo Gonder.
Xukuumadda Adisababa oo war kooban kasoo saartay dagaalada ayaa waxay sheegtay iney horumar weyn ka gaartay dagaalada ka socda galbedka gobolka Wallo oo dhaca bartamaha dhulka Amxaarada, kadib markii sida ay sheegtay ay Tigreega ku qaaday weerar cir iyo dhul ah oo isla socda. Waxay ku faantay iney ka qabsatay degaano iyo magaalooyin ay kamid yihiin Tena iyo Ambaaseel, ayna dileen ciidamo badan oo TPLF, ah, laakin ma aaney soo bandhigin muuqaallo ama caddeymo muujin kara arrintaas. Ilaha madaxa bannaanse waxay sheegayaan in rag badan oo Tigree ah lagu dilay dagaaladaas.
Sadax saacadood kadib, sheegashada dowladda, waxaa soo baxday xog kale oo sheegeysa in Tigreegu ay horumar ka sameeyeen difaacyadii la isku horfadhiyay iyagoo soo bandhigay muuqaallo ay ka duubeen buuraha dhakadooda lagana arki karo ciidanka dowladda Itoobiya oo cararaya kana soo baxaya furimaha. Marka laga yimaado gobolka Wallo, TPLF, ayaa waxay guulo ka sheegatay dagaalo ka dhacay gobolka Gonder, waxayna baraha Internerka ku baahisay agab milatari oo ay kasoo furatay ciidanka dowladda Itoobiya.
Tigree waxay sheegeen in ay maamulayaan gobolka Gonder, gaar ahaan aaggiisa dhanka Koofur Bari iskuna fidiyeen dhulka baaxaddiisa, waxaa la arkayaan gaadiid Taangiyo hor leh oo ay ka furteen ciidanka Itoobiya iyadoo malleyshiyaadkoodu ay kamid yihiin qaar aan wali qaan gaarin oo hubkooda wata. Intaa waxaa dheer oo ay Tigree ku faaneen iney gacanta ku hayaan ciidamo isi soo dhiibay oo ka tirsan Dowladda iyo malleyshiyada Amxaarada.
Sidoo kale, dagaallo qaraar ayaa waxaa laga soo sheegayaa aagga waqooyiga gobolka Gonder, kuwaasoo ay aad uga dhex muuqdaan ciidanka Eratariya oo garab siinaya kuwa Itoobiya. Sida laga soo xigtay ilo wareedyo kala duwan, jiidahan ayaa waxay dagaaladu ka socdaan muddo 4 maalmood oo xariir ah. Meydadka ayaa noqday kuwa tira beel ah, dhaawacna warkiisa iska daa, halka dhinacyada ku dagaalamayaahina aaney kala gaarin horumar xaggga dhulka ah.
Dagaaladan ayaa aad usii niyad jabinaya dowladda Itoobiya oo uu dhaqaalaheedu dhulka sii galayo, tiiyoo ay u dheer tahay cadaadiska uga imanaya Reer Galbeedka. Waxyaabaha ay reer galbeedku marmarsiyada uga dhigtaan dilka ama xarigga madaxda Afrikaanka ah ayaa waxaa kamid ah iney ku eedeeyaan ku tumashada xuquuqul insaanka, inta badanna iyaga ayaa abuura. Maalintii shalay waxaa is-casishay haweeney Soomaali maqaar-saar ahayd oo ka tirsanayd Wasiirada Adis-ababa, gaar ahaanna ahayd Wasiirka Arrimaha Haweenka, taasoo la sheegayo in Reer Galbeedku ku qalqaaliyeen tallaabaadaas iyo iney shaaciso kufsiga iyo xadgudubyada ay ciidanka Itoobiya u geysteen TPLF.
Tigreegu waxay ku goodinayaan iney sii wadi doonaan dagaalada illaa ay ka qabsadaan Adis-ababa. Mid kamid ah siyaasiyiinta Tigree wuxuu bartiisa Facebook kusoo qoray war uu ku sheegay iney isku duuban yihiin, Abeyna ha ogaado ayuu yiri, annagu ma nihin sida siyaasiyiinta caadaqaatayaasha ah ee Soomaalida ee isaga u shaqeeya.
Isku soo wada duuboo dagaalada Itoobiya ayaa ah kuwa sii xoogeysanaya, khasaarooyinka ka dhashayna marka laga yimaado dhimashada faraha badan, dhaawaca iyo barakaca, waxaa kamid ah iney burbureen gobolada Gonder iyo Wallo, sidii BM-ka iyo madaafiicda kale loogu garaacayay.
cusmaan 2984 posts 5 comments
Xoghayaha degmada Hodan oo Caawa lagu dilay Muqdisho.
Kamiin Askar Shisheeye iyo Soomaali lagu dilay oo ka dhacay Shabeellaha Hoose.
Qarax culus oo khasaare dhaliyay Oo ka dhacay Baladweyn.
Axmad	 Oct 16, 2021 0
Kamiin Askar Shisheeye iyo Soomaali lagu dilay oo ka dhacay…